चीन नक्काशीदार पहेंलो संगमरमर अनुयायी फूलदान TAFV-006 निर्माता र आपूर्तिकर्ता | शीर्ष सबै समूह
साइड एन्ड टेबल
बगैचा बत्ती मूर्तिकला
संगमरमर परी मूर्तिकला
चार मौसम मूर्ति
स्टोन बल फाउन्टेन
स्टोन सिङ्क र बाथटब
काउन्टरटप र भ्यानिटी शीर्ष
स्टोन वाल प्यानलहरू
सेतो संगमरमर करूब बेन्च TAMB-045
शेर TAMB-041 संग पहेंलो संगमरमर बेन्च
विश्व नक्सा र स्टार मार्क काउन्टको साथ कालो ग्रेनाइट बल...
दुबै ह्यान्ड बेस फाउन्टेनमा कालो ग्रेनाइट क्षेत्र TASB...
एग प्लस सेतो मार्बल फ्री स्ट्यान्डिङ बाथटब TABT-036
प्राकृतिक आउटडोर ग्रेनाइट स्टोन राउन्ड गार्डन वाश बेसी ...
हात नक्काशी गरिएको पहेंलो बगैचा फाउन्टेन TAGF-21
Guangxi सेतो संगमरमर पानी फव्वारा TAGF-20
सूर्यास्त रातो संगमरमर ग्यालेरी TAGG-017
कार संग प्रसिद्ध शैली प्रकृति सेतो संगमरमर फूल भाँडो ...
सेतो संगमरमरको फूलको भाँडो TAFV-015 संग नक्काशीदार करूब
क्लासिक शैली संगमरमर फूल बर्तन TAFV-014
नक्काशीदार पहेंलो संगमरमर अनुयायी फूलदान TAFV-006
नि: शुल्क स्ट्यान्डिङ संगमरमर फायरप्लेस mantel TAFM-019
TAFM-018 वरिपरि फूल नक्काशीदार सेतो संगमरमर फायरप्लेस
इलेक्ट्रिक संगमरमर फायर प्लेस फ्रेम TAFM-017
इनडोर क्लासिक सजावटी प्राकृतिक ग्यास संगमरमर फायरप्ले...
हात नक्काशी गरिएको भित्री सेतो संगमरमर फायरप्लेस TAFM-015
उत्पादन विवरण प्रकृति संगमरमर फूलदानी, फूलको भाँडो, नक्काशीदार पहेंलो संगमरमर फलोवर फूलदानी हामी आवासीय र व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि हात नक्काशीदार, अलंकृत, ठोस ढुङ्गाको फूलदानहरू र ढुङ्गाका फूलदानहरू र संगमरमरको बगैंचा प्लान्टहरू डिजाइन र नक्काशी गर्छौं। ढुङ्गाको संगमरमरको फूलदानी, ढुङ्गाको फूलदानी, फूलदानीसहितको फूल, फूलदानीदेखि लिएर साना–ठूला सबै किसिमका फूलदानी, फूलदानी शिल्प । ती सबै हाम्रो ढुङ्गा नक्काशी उत्पादन दायरा बाट पाउन सकिन्छ। नक्काशीदार ढु stone्गाको फूलदानी र फूलदानहरू उत्तम विकल्प हुन् ...
व्यावसायिक ढुङ्गा उत्पादन कारखाना
प्रकृति संगमरमरको फूलदानी, फूलको भाँडो
हामी आवासीय र व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि हात नक्काशीदार, अलंकृत, ठोस ढु stone्गाको फूलपाती र ढु stone्गाका फूलदानहरू र संगमरमर बगैंचा प्लान्टहरू डिजाइन र नक्काशी गर्छौं। ढुङ्गाको संगमरमरको फूलदानी, ढुङ्गाको फूलदानी, फूलदानीसहितको फूल, फूलदानीदेखि लिएर साना–ठूला सबै किसिमका फूलदानी, फूलदानी शिल्प । ती सबै हाम्रो ढुङ्गा नक्काशी उत्पादन दायरा बाट पाउन सकिन्छ। नक्काशीदार ढुङ्गाको फूलदानी र फूलदानहरू तपाईंको भित्री र बाहिरी बगैंचा दुवै ठाउँको सौन्दर्य र भव्यता बढाउनको लागि उत्तम विकल्प हुन्।
संगमरमरको फूलदानी, फूलको भाँडो
60-100cm उच्च वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार
सेतो, कालो, बेज संगमरमर आदि।
घर, स्क्वायर, बगैचा, सजावट। पार्क
अमेरिका, युरोप, रूस, अष्ट्रेलिया र मध्य पूर्व
नरम फोमको साथ बलियो काठको बक्स
T/T (30% जम्मा, ब्यालेन्स ढुवानी अघि भुक्तान गर्नुपर्छ)
जम्मा प्राप्त गरेको लगभग 40 दिन पछि
व्यावसायिक बिक्री र राम्रो टोली काम
कडा गुणस्तर नियन्त्रण
अनुकूलित मूर्तिकलाहरू बनाउनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो। क्ले मोल्ड सेवाले तपाईंको माग पूरा गर्न सक्छ र तपाईंको कलात्मक रचनात्मकता महसुस गर्न सक्छ र 3D प्रिन्टेड मोल्ड वा 3D Obj फाइलहरू पनि स्वागत छ जसमा हामी आधारित मूर्तिहरू सिर्जना गर्न सक्छौं। मूर्तिकार र वास्तुकारहरूले शताब्दीयौंदेखि संगमरमरको प्रयोग गर्दै आएका छन्, यसको कुलीन शक्ति र सौन्दर्य दुवैको लागि चयन गरिएको छ। पुरातन ग्रीस र रोमका भवनहरूदेखि लिएर ताजमहलको सुरम्य भव्यतासम्म, संगमरमरको अकाल र भव्यता संसारभरि परिचित छ। धेरैजसो मानिसहरूले एक विशेष कार्यक्रमको समयमा संगमरमरको मनमोहक सौन्दर्य अनुभव गरेको हुनसक्छ जस्तै अपस्केल विवाह रिसेप्शनको असाधारण हलहरू, केवल पछिल्लो दशकमा यो असाधारण सामग्री केवल भव्य हवेली र दरबारहरू भन्दा बढी घरहरू सजाउन उपलब्ध भएको छ। शीर्ष मूर्तिकलाले यसलाई तपाईंको घर र जीवनमा ल्याउँछ। हामी केवल उत्कृष्ट गुणस्तर, 100% ठोस संगमरमर, हात नक्काशी संगमरमर, छिटो डेलिभरी प्रयोग गर्दछौं।
हाम्रो मूर्तिकला कारखाना Quyang काउन्टी, Hebei प्रान्त, चीन मा स्थित छ। चीनको बेइजिङ सहर नजिकै । तपाईं हामीलाई आफ्नो देशबाट बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेट्न सक्नुहुन्छ। एयरपोर्ट देखि हाम्रो कारखाना सम्म कार द्वारा लगभग4घण्टा लाग्छ।
हाम्रा मुख्य फाइदाहरू के हुन्?
a 20 वर्षको निर्यात अनुभव, 45 देशहरूमा ग्राहकहरू।
b आफ्नै खदान र कारखानाहरूले स्थिर आपूर्ति र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू बनाउँछन्।
ग मार्बल कारखानामा 300 गुफा र ग्रेनाइट कारखानामा 200 केभरहरूले ग्राहकहरूलाई डेलिभरीको चिन्ता नगर्ने।
d राम्रो गुणस्तर जाँच, गृहपृष्ठमा परिचय हेर्नुहोस्।
प्रयोग गरिएको सामग्री के हो र तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु कसरी बनाउने?
सबै प्राकृतिक ढुङ्गा, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलौटे ढुङ्गा, ट्राभर्टाइन, चुनढुङ्गा मा। हामीले उन्नत सीएनसी मेसिन कार्यको साथ उत्कृष्ट हात नक्काशीलाई जोड्यौं। हाम्रा मूर्तिकलाहरू, नक्काशीहरू 100% प्राकृतिक ठोस ढुङ्गा, टाइलहरू, काउन्टरटपहरू, समतल सामग्रीहरूबाट हात कुँदिएका छन्, हामी तिनीहरूलाई हाम्रो CNC मेसिनद्वारा बनाउँछौं।
कस्ता रंगहरू उपलब्ध छन्?
ढुङ्गाका उत्पादनहरूमा चयनका लागि धेरै रंगहरू छन्, तिनीहरू सबै प्राकृतिक रंग हुन्। विवरणहरू कृपया "SAMPLE COLOR" बाट फेला पार्नुहोस्।
उपलब्ध आयामहरू के हुन्?
TOP SCULPTURE अत्यधिक अनुकूलन योग्य छ। हामी तपाईलाई मनपर्ने आयामहरूमा नक्काशी गर्न सक्छौं।
के तपाइँको अनुकूलन बनाउँछ?
हो, हामी राम्रो शिल्प कौशलमा तपाईंको रेखाचित्र र चित्रबाट ढुङ्गा खोप्छौं।
के तपाइँ स्थापना गर्नुहुन्छ?
हामी सीधै स्थापना गर्दैनौं। तपाईंले हाम्रा वितरकहरू वा तपाईंको क्षेत्रमा अन्य ढुङ्गा निर्माणकर्ताहरू र ठेकेदारहरूबाट मद्दत लिन सक्नुहुन्छ।
के म उत्पादन प्रक्रिया हेर्न सक्छु?
हो। हामी तपाईंलाई उत्पादन फोटोहरू पोस्ट राख्नेछौं। हामीले अन्तिम उत्पादनहरूमा तपाईंको स्वीकृति प्राप्त नगरेसम्म हामी उत्पादनहरू प्याक गर्ने छैनौं। यस बीचमा, हामी हाम्रो कारखानामा तपाईंको भ्रमणलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। तपाईंले गुणस्तर जाँच गरेपछि, हामी यसलाई पठाउँछौं।
के तपाइँसँग ग्राहकहरूलाई सीडी क्याटलग पठाउने छ?
हो। हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरूको सबै चित्रहरू सहित सीडी छ। यदि तपाइँ हाम्रा उत्पादनहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँको चयनको लागि तपाइँलाई हाम्रो सीडी क्याटलग पठाउन सक्छौं।
के तपाइँ व्यक्तिगत आदेश स्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईं व्यक्तिगत अर्डरसँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ?
हो, हामी व्यक्तिगत अर्डर स्वीकार गर्छौं।
तपाईलाई चाहिने न्यूनतम मात्रा के हो?
हाम्रो न्यूनतम अर्डर 1 टुक्रा हो।
तपाईको वारेन्ट नीति के हो?
शीर्ष मूर्तिकलाहरूले वारेन्टी दिन्छ कि सबै नक्काशी गरिएका ढुङ्गाका वस्तुहरू व्यापारयोग्य गुणस्तरका छन् र यदि दोषपूर्ण वा भाँचिएको छ भने प्रतिस्थापन गरिनेछ। ग्राहकले हामीलाई डेलिभरीको 10 दिन भित्र सूचित गर्नुपर्छ। हो, हामी पक्का छौं कि हाम्रो प्याकिंग पर्याप्त सुरक्षित छ। हामी बाहिरी प्याकिङको लागि कडा काठको बक्सा प्रयोग गर्छौं। भित्र, हामी गत्ता बक्स प्रयोग गर्छौं। थप रूपमा, हामी तपाइँको आवश्यकता अनुसार "सबै जोखिम" बीमा खरीद गर्नेछौं। क्षति भएको अवस्थामा, पहिले तपाईले क्षतिको दाबी गर्न बीमा कम्पनीलाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्याकिङको गल्तीको कारण क्षति भयो भने, हाम्रो कम्पनीले जिम्मेवारी लिनेछ।
जहाज, ट्रक वा लापरवाह ह्यान्डलिङको कारणले गर्दा हिंसक टक्करको कारण राम्रो भाँचिएको हुन सक्छ। कृपया तपाईंले यसलाई खोल्नु अघि प्याकिङका धेरै फोटोहरू लिनुहोस्। यदि प्याकिङ ठीक छ, तर सामान बिग्रिएको छ, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसको विपरित, प्याकिङ र सामान दुवै बिग्रिएको छ भने, यो लजिस्टिक कम्पनीको जिम्मेवारी हो।
हामी वाचा गर्छौं: कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी छैन, जबसम्म सामानहरू बिग्रेको छ, हामी तपाईंलाई कम से कम समयमा स्वतन्त्र रूपमा नयाँ पठाउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
प्याकेज के हो?
नक्काशी गरिएको ढुङ्गा बलियो समुद्र योग्य काठको क्रेटहरूमा प्याक गरिएको छ। प्रत्येक ढुङ्गा राम्रोसँग सुरक्षित छ।
फ्युमिगेशनको बारेमा कसरी?
सबै काठको बक्सा ढुवानी अघि धूमिल छन्। तपाईंको कस्टम क्लियरेन्स प्रक्रियाहरूको लागि अनुरोधमा फ्युमिगेशनको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ।
एक कन्टेनरमा कति वस्तुहरू लोड गर्न सकिन्छ?
सामान्यतया एउटा कन्टेनरले वस्तुहरूमा निर्भर गर्दछ लगभग 16-25MT लोड गर्न सक्छ। तपाईलाई उद्धृत गर्दा वजन अनुमान गरिएको छ।
तपाईंको नेतृत्व समय के हो?
1. सामान्यतया एक कन्टेनर अर्डर 35 दिन आवश्यक छ।
2. यातायात अवधि जानकारी:
3. पश्चिम युरोपेली मुख्य पोर्ट: 27 दिन
4. फ्लेक्सटोन / बेलफास्ट / दक्षिण ह्याम्पटन: 40 दिन
5. डब्लिन: 35 दिन
6. अमेरिका को पश्चिमी तट: लगभग 18 दिन
7. अमेरिका को पूर्वी तट: लगभग 30 दिन
अन्य गन्तव्य, हाम्रो जवाफ प्राप्त गर्न हामीलाई इमेल गर्नुहोस्।
के तपाई मेरो घरमा सामान पठाउन सक्नुहुन्छ?
हो हामी सक्छौ। हामी ढुवानीको व्यवस्था गर्न सक्छौं र तपाईंको अर्डर सिधै तपाईंको घरमा पुर्‍याउन सक्छौं।
तपाईंको स्वीकार्य भुक्तानी सर्तहरू के हुन्?
1. T/T (टेलीग्राफिक स्थानान्तरण) --- उत्पादन अघि 30% निक्षेप, 70% फ्याक्स वा इ-मेल मार्फत लडिङ्ग बिल को प्रतिलिपि प्राप्त पछि भुक्तान गरियो।
2. नजरमा अपरिवर्तनीय L/C (क्रेडिट पत्र)।
तपाईंसँग कुनै प्रश्न वा अस्पष्ट बिन्दु छ, PLS हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंको लागि जवाफ पाउँदा खुसी छौं।
उत्पादन दायरा: स्टोन फ्लावरपोट, स्टोन प्लान्टहरू, स्टोन वेस, स्टोन कलश, ग्रेनाइट फूलदानहरू, स्यान्डस्टोन फ्लावरपोट, हात नक्काशीदार ढु stone्गाका फूलदानहरू, बगैंचा फ्लावरपोट, फूलहरूको फूलदान, मार्बल फ्लावरपोट, पेडेस्टल फूलदानहरू। सबै प्रकारका पश्चिमी शैली नक्काशीदार मूर्तिकला, निर्माण नक्काशी, फायरप्लेस आवरण, ल्यान्डस्केप र बगैचा आभूषण।
अनुकूलित डिजाइनहरू र आयामहरू पनि उपलब्ध छन् र स्वागत छ, तपाईंले हामीलाई तपाईंको डिजाइनको फोटो, रेखाचित्र वा तस्विर इमेल गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि हामी तपाईंको सपना साकार पार्न सक्छौं। दुबै राम्रो गुणस्तर र उत्तम मूल्य।
कृपया मूल्य, आकार र अन्य जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
अघिल्लो: सरल शैली प्रकृति संगमरमर फायरप्लेस mantel TAFM-048
अर्को: ग्रेनाइट फूल फूलदान TAFV-007
एन्टिक स्टोन फूलदानी
नक्काशीदार पहेंलो संगमरमर अनुयायी फूलदान
मार्बल फ्लावरपोट युरोपियनाइज गर्नुहोस्
बगैचा ठूला फूलदानहरू
बगैचा मार्बल फूलदान
हरियो संगमरमरको फूलदानहरू
हातले नक्काशीदार ढुङ्गाको फूलपाती
जटिल संगमरमर फूलदान
मार्बल ग्रेभ फूलदान
मार्बल बिरुवाको भाँडो
प्राकृतिक ढुङ्गाको फूलको भाँडो
प्राकृतिक सेतो पत्थर फूलदान
बाहिरी सजावटी फूलदानहरू
बाहिरी स्टोन एन्टिक फूलदानी
गोल आकार संगमरमर फूलदान
हात नक्काशी गरिएको प्राकृतिक संगमरमर फूलपट TAFV-023
रोमन शैली स्टोन फूल फूलदान TAFV-045
सस्तो मार्बल फ्लावर प्लान्टर बर्तन TAFV-043
प्रकृति सेतो संगमरमर फूल बर्तन TAFV-011
फोन: +86-18030304532 (Wechat, WhatsApp, Viber)
स्काइप: शीर्ष मूर्तिकला